Daraawiishta Jubbaland oo hawlgal ku dilay jorjooge Al Shabaab ka tirsanaa,
Monday February 03, 2020 - 23:19:11 in Wararka by Mustaf Xuseen
Ciidamada daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland ayaa hawlgal qorsheysan oo ka dhan ahaa Ururka Al-Shabaab ka fuliyay deegaano Galbeed ka xiga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Laamaha amniga Jubbaland ayaa sheegay in hawlgalkaas laga f
Ciidamada daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland ayaa hawlgal qorsheysan oo ka dhan ahaa Ururka Al-Shabaab ka fuliyay deegaano Galbeed ka xiga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Laamaha amniga Jubbaland ayaa sheegay in hawlgalkaas laga fuliyey deegaanka Baarxaani gaar ahaan aaga Labi-kuus isla markaana lagu diley xubin ka tirsanaa Al-Shabaab.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid la qorsheeyey isla markaana ciidamada ay dileen sarkaalkii u qaabilsanaa Al-Shabaab aaga Labi-kuus, sidoo kalena ay ka soo furteen qori AK-47 iyo saanad kale oo ciidan.
Sidoo kale afhayeenka waxaa uu hadalkiisa intaa ku darey in hawlgalkaas uu ahaa mid looga hortagayay Xubno ka tirsan Al-Shabaab oo qorsheeynayay inay weeraro fuliyaan